Infographic တွေဘယ်လို အသုံးဝင်လဲ? -
Digital Marketing နယ်ပယ်မှာသင့်ရဲ့ Brand Awareness ကိုဘယ်လိုတိုးလာအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားထားပါသလဲ? Content တွေဟာ Digital Marketing အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အချက်တစ်ချက်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ Content တွေဟာအရေးပါသလို Infographic တွေကလည်း အရေးပါတဲ့ လျှို့
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ နောက်ပိုင်း Audience တွေက စာဖတ်နေရတာထက်စာရင် မျက်စိပဒါသဖြစ်ပြီး မျက်လုံးထဲမှာ စွဲနေစေတဲ့ Infographic တွေ၊ Video အတိုလေးတွေကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။ Infographic လေးတွေဆိုတော့ ဖန်တီးထားတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်၊ Creative ဆန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ Audience ဟာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲ သူတို့ရဲ့ Communication တွေဆီကို Sharing တွေလုပ်လာကြပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာလည်း Infographic လေးတွေနဲ့ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ အဓိကကျတဲ့ အချက်တွေကိုလိုရင်တိုရှင်းနဲ့ ဖော်ပြထားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် သိသာတဲ့ Engagement တွေကိုရရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ လူသားတွေရဲ့ ဦးနှောက်မှာ အမြင်အာရုံဟာ Image ကိုမှတ်မိနိုင်စွမ်းက Text တွေကိုမှတ်မိနိုင်စွမ်းထက် အဆ (၆) သောင်းပိုမြန်တယ်လို့ ၉၀% သိရှိထားရပါတယ်။ လူအများစုဟာဆိုရင် သူတို့ဖတ်ထားတဲ့အရာတွေကို ၂၀% လောက်သာပြန်မှတ်မိတယ်ဆိုပြီး သိရှိထားပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကို ကြည့်တာနဲ့တင် Infographic ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေကို သတိပြုမိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီတော့ Infographic လေးတွေကိုအဆင်ပြေပြေနဲ့ ဖန်တီးနိုင်မယ့် Tools အချို့ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်…
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် Infographic တွေကြီးပဲသုံးရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ Infographic တစ်လှည့်သုံးလိုက်၊ Content တစ်လှည့်သုံးနဲ့ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ သင့်တော်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကို သုံးပြီး Audience ရဲ့ Engagement ကို ပိုမိုရယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Friday September 27th, 2019/ Blog/0Comment